နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါအတှကျ ထိရောကျတဲ့ ဆေးနညျးကောငျး – Cele Lover
နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါအတှကျ ထိရောကျတဲ့ ဆေးနညျးကောငျး
ခှဲစိတျကုသရငျ (၁၀) သိနျးနဲ့အထကျကုနျကနြိုငျမယျ့ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါကို တဈပွား၊ တဈခပျြမှ မကုနျဘဲ ပြောကျကငျးသှားဆေးတဲ့ ဆေးနညျးလေးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။နှလုံး သှေးကွောကဉျြးပွီး အသကျရှူုမဝ၍ ဆရာဝနျနှငျ့ပွ၊ဆေးမြားသောကျသျောလညျး သကျသာလှသညျ မဟုတျပါ။နှလုံး အထူးကုဆရာဝနျကွီးနှငျ့ပွကွညျ့ရာ ခှဲစိတျဖို့အကွံပေးပွီး ရကျခြိနျးပေးထားသညျ ဆိုပါသညျ။ထိုသူငယျခငျြး ကံကောငျးသညျဟု ဆိုရပလေိမျ့မညျ။
ဖဘေု့တျပျေါမှဆေးနညျးကောငျးလေးတဈခုရ၍ခှဲစိတျခငျြသောစိတျဆန်ဒလညျးမရှိသောကွောငျ့ထိုဆေးနညျးလေးအားအားကိုးအားထား ကာ ဆေးညှနျးအတိုငျးဆောငျရှကျခဲ့ပါသညျ။ကွကျသှနျဖွူ သူငယျခငျြးအားလညျးမခှဲစိတျစခေငျြပါအကွောငျးကားခှဲစိတျမညျဆိုပါကသိနျး(၁၀)အထကျသာကုနျကမြညျဖွဈပွီးဝနျထမျးတဈယောကျ၏လစာအခွအေနနှေငျ့ လုံးဝမလှယျကူသောကွောငျ့ဖွဈလသေညျ။သူငယျခငျြးဆုတောငျးပွညျ့ပါသညျ။
ခှဲစိတျစရာမလိုတော့ပါ။နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါ သိသိသာသာသကျသာသှား၍ဖွဈ လသေညျ။ထိုဆေးနညျးမှာ….(၁)ခငျြးစိမျးသတ်တုရညျလကျဖကျရညျပနျးကနျ(၁)ခှကျ၊(၂)ကွကျသှနျဖွူသတ်တုရညျလကျဖကျရညျပနျးကနျ(၁)ခှကျ၊(၃)ရှောကျရညျလကျဖကျရညျပနျးကနျ(၁)ခှကျ၊(၄)ပနျးသီးရှာလကာရညျလကျဖကျရညျပနျးကနျ(၁)ခှကျထို(၄)ခှကျအားဆတူရော၍ (၃)ခှကျလြှငျ (၂)ခှကျကနျြအောငျ ကြိုရပါမညျ။
ခငျြးစိမျး ထို(၃)ခှကျ(၂)ခှကျစာကနျြပါကပြားရညျစဈစဈလကျဖကျရညျပနျးကနျလုံး(၃)ခှကျနှငျ့နနှငျးမှုနျ့ကှမျးသီးလုံး(၁)လုံးစာမြှထညျ့မှပွေီးတဈညအိပျနှပျထားရပါမညျ။တဈနလြေှ့ငျထမငျးစားဇှနျး(၁)ဇှနျးသောကျပါ။ပနျးသီးရှာလကာရညျကိုအသငျ့ဝယျယူ၍ရနပေါပွီ။ထိုဆေးနညျးမှာနက်ခတ်တရောငျခွညျတှငျဖတျရှုရသောမောငျအေးကွူ(စီးပှားရေး)၏နှလုံးသှေးကွောကဉျြးဝဒေနာရှငျမြားအတှကျမှ ထုတျနုတျဖျေါပွခွငျးဖွဈပါသညျ။နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါသကျသာသညျမှာအမှနျဖွဈပါ၍ထပျဆငျ့ဝငှေလိုကျပါသညျ….။လိုသူယူသုံးစိတျနှလုံးရှငျပွုံးနိုငျပါစေ…။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအတွက် ထိရောက်တဲ့ ဆေးနည်းကောင်း
ခွဲစိတ်ကုသရင် (၁၀) သိန်းနဲ့အထက်ကုန်ကျနိုင်မယ့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကို တစ်ပြား၊ တစ်ချပ်မှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းသွားဆေးတဲ့ ဆေးနည်းလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။နှလုံး သွေးကြောကျဉ်းပြီး အသက်ရှူုမဝ၍ ဆရာဝန်နှင့်ပြ၊ဆေးများသောက်သော်လည်း သက်သာလှသည် မဟုတ်ပါ။နှလုံး အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့်ပြကြည့်ရာ ခွဲစိတ်ဖို့အကြံပေးပြီး ရက်ချိန်းပေးထားသည် ဆိုပါသည်။ထိုသူငယ်ချင်း ကံကောင်းသည်ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။
ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှဆေးနည်းကောင်းလေးတစ်ခုရ၍ခွဲစိတ်ချင်သောစိတ်ဆန္ဒလည်းမရှိသောကြောင့်ထိုဆေးနည်းလေးအားအားကိုးအားထား ကာ ဆေးညွှန်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ကြက်သွန်ဖြူ သူငယ်ချင်းအားလည်းမခွဲစိတ်စေချင်ပါအကြောင်းကားခွဲစိတ်မည်ဆိုပါကသိန်း(၁၀)အထက်သာကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်၏လစာအခြေအနေနှင့် လုံးဝမလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။သူငယ်ချင်းဆုတောင်းပြည့်ပါသည်။
ခွဲစိတ်စရာမလိုတော့ပါ။နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ သိသိသာသာသက်သာသွား၍ဖြစ် လေသည်။ထိုဆေးနည်းမှာ….(၁)ချင်းစိမ်းသတ္တုရည်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)ခွက်၊(၂)ကြက်သွန်ဖြူသတ္တုရည်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)ခွက်၊(၃)ရှောက်ရည်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)ခွက်၊(၄)ပန်းသီးရှာလကာရည်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)ခွက်ထို(၄)ခွက်အားဆတူရော၍ (၃)ခွက်လျှင် (၂)ခွက်ကျန်အောင် ကျိုရပါမည်။
ချင်းစိမ်း ထို(၃)ခွက်(၂)ခွက်စာကျန်ပါကပျားရည်စစ်စစ်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး(၃)ခွက်နှင့်နနွင်းမှုန့်ကွမ်းသီးလုံး(၁)လုံးစာမျှထည့်မွှေပြီးတစ်ညအိပ်နှပ်ထားရပါမည်။တစ်နေ့လျှင်ထမင်းစားဇွန်း(၁)ဇွန်းသောက်ပါ။ပန်းသီးရှာလကာရည်ကိုအသင့်ဝယ်ယူ၍ရနေပါပြီ။ထိုဆေးနည်းမှာနက္ခတ္တရောင်ခြည်တွင်ဖတ်ရှုရသောမောင်အေးကြူ(စီးပွားရေး)၏နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းဝေဒနာရှင်များအတွက်မှ ထုတ်နုတ်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါသက်သာသည်မှာအမှန်ဖြစ်ပါ၍ထပ်ဆင့်ဝေငှလိုက်ပါသည်….။လိုသူယူသုံးစိတ်နှလုံးရွှင်ပြုံးနိုင်ပါစေ…။
Previous Article ကလေး၇ယောကျအမေ မဝါဝါလေးတို့မိသားစုအတှကျ အိမျဆောကျပေးနတေဲ့ လကျရှိအခွအေနတှေကေို ပွော ပွလာတဲ့ ဝဠေုကြျော
Next Article F-ARMY အ တှကျ သငျတနျး တကျ နသေော အနုပညာ ရှငျမြား